Amagama efayile amade Windows 10 > UVielhuber uDavid
Amagama efayile amade Windows 1004
Ayisiyiyo kuphela xa usebenzisa i- npm phantsi kweWindows apho ufumana umda ngoku osele uneminyaka engama-30 ubudala, ethintela iindlela kwiifolda nakwiifayile ukuya kubalinganiswa abangama-255. Le asiyompazamo ye-NTFS kodwa yi- LFN . Oku kukhokelela kwiibugs ezicaphukisayo kunye nokungahambelani phakathi kweenkqubo zokusebenza. Ngamaxesha eWSL le yimeko ebuhlungu, ngethamsanqa unokuzilungisa ngokwakho kwirejista kangangexesha elithile.
Nokuba ungangoku Windows 10 Pro 1709 ufumana lo myalezo xa usenza ifolda / indlela yefayile inde kakhulu:
Emva kohlaziyo lweSikhumbuzo Windows 10 ungawuphakamisa lo mda. Kuya kufuneka uyazi ukuba isoftware endala ayisakwazi ukufikelela kwiifayile ezingaphandle kwalo mda. Ayizizo zonke iisoftware ezingama-32 ezichaphazelekayo apha kwaye unokuzivumela ukuba zehle kuvavanyo. Ungena kwisitshixo nge regedit
kwaye iyila (ukuba ayisekho) ixabiso le-DWORD (32-bit) LongPathsEnabled kwaye usete ixabiso ku-1.
Utshintsho luyasebenza emva kokuqalisa kwakhona. Ngelishwa, i-Windows Explorer engaphakathi endlini ayixhasi iindlela ezinde ngalo mzuzu (oku kuyathemba ukuba kuya kutshintsha kwikamva). Endaweni yoko ungasebenzisa izixhobo ezinamandla ngakumbi njenge- Commander enye , ngoku evumela iindlela ezinobude beempawu ezingama-32767.